Gisella Cardia - Ny hazofijaliana dia hanazava ny lanitra tsy ho ela - Countdown ho an'ny fanjakana
Gisella Cardia: hanazava ny lanitra ny hazofijaliana tsy ho ela
Izahay dia	Gisella Cardia	,April 21, 2020:
Ry zanaka malala, misaotra anao fa tonga eto am-bavaka ary tamin'ny fihainoanao ny antsoko ao am-ponao. Ny zanako vavy, toy ny tamin'ny andro voalohany*, Miangavy anao indray aho mamoha ny varavaranao sy ny sandrinao: omeo fitiavana, fahatokisana ary tanjaka amin'ireo zaza hirahiko aminao. Manomàna fandosirana azo antoka amin'ny fotoana ho avy;** mandeha ny fanenjehana, mitandrema hatrany. Anaka, mangataka hery sy herimpo aminareo aho; mivavaha ho an'ny maty fa misy ary hisy, hitohy ny valanaretina mandra-pahitan'ny zanako ny fahazavan'Andriamanitra ao am-pony. Ny hazofijaliana dia hanazava ny lanitra tsy ho ela, ary izany dia ho asa famindram-po farany. Tsy ho ela, tsy ho ela dia ho tonga haingana ny zava-drehetra, ka hino ianao fa tsy afaka handray izany fanaintainana rehetra izany intsony, fa ankinina amin'ny Mpamonjy anao ny zavatra rehetra, satria vonona hanavao ny zava-drehetra izy, ary ny fiainanao dia ho fitoeran'ny fifaliana sy fitiavana. Aza matahotra, satria ho eo anilanao aho ary tsy ho ela dia hiara-mandresy aminao ny Foko Malalaka. Hanova ny fiainanao manontolo; indro manohy miasa ny Fanahy Masina. Aza matahotra - hery sy herim-po, anaka. Ankehitriny dia avelako miaraka amin'ny fitahiako masina amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena.
* Ny voalaza fa fisehoan'ny Virjiny Maria tany Gisella Cardia ao Trevignano Romano dia natomboka tamin'ny taona 2016. [Fanamarihan'ny mpandika teny.]
**Comment [ao amin'ny bilaogy fisehoan'ny Trevignano Romano]: Ao amin'ny hafatra androany, ny Lady dia mangataka antsika hanomana mpitsoa-ponenana azo antoka [rifugi sicuri] izay toerana izay misy hery hivavahana, ie izay misy cenacles [vondrom-bavaka], satria raha misy ny vavaka marina sy marina, dia tsy hiditra ny ratsy. Ny fialokalofana lehibe indrindra dia ny Fitiavan'i Maria sy i Jesosy, noho izany dia ilaina ny fiovam-po marina mba ho ampahany amin'izy ireo.
Posted in Gisella Cardia, Messages, Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana.
← Edson Glauber - Fatima Will…
Gisella Cardia - Tian'izy ireo… →